Budata Webroot Spy Sweeper maka Windows
Budata Webroot Spy Sweeper
Free Budata maka Windows (40.12 MB)
Budata Webroot Spy Sweeper,
Site na mmemme ndị ọkachamara kwadoro ka ọ bụrụ mmemme nchọpụta spyware kachasị elu, ị nwere ike ichebe kọmputa gị pụọ na Spyware, nke na -etolite kwa ụbọchị. Ihe mmemme a na -egbochi Spyware ọ na -achọpụta ma ọ bụ hichapụ Spyware nke na -etinye na sistemụ gị. mmelite megide mwakpo Spyware ọhụrụ ịbụ. Na mgbakwunye na ichebe gị pụọ na spyware niile edebanyere na nchekwa data Spy Sweeper, nọrọ na nche mgbe niile na mmelite megide spyware ọhụrụ kwa ụbọchị. Usoro mmelite ahụ bụ nefu, a na -eme ya ozugbo ewepụtara ụdị spyware ọhụrụ. Kedu ihe dị ọhụrụ na mmemme a:
Ịbụ mmemme a na -akwado Microsoft Windows Vista, nke bụ ngwanrọ a na -atụ anya ya noge na -adịbeghị anya, bụ otu nime ihe ọhụrụ kachasị ọhụrụ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ ọrụ ngwanrọ na -akwadebe ngwungwu Vista ha dakọtara, Spy Sweeper 5.3 elekọtala nke a.
Nnyocha ngwa ngwa maka spyware na ịntanetị ma ọ bụ kọmputa gị nụzọ kachasị mfe yana nchọta zuru oke yana nhọrọ ọchụchọ nhọrọ.
Iji chekwaa oge, Spy Sweeper na -enyekwa gị ụdị faịlụ spyware nke o kpebisiri ike na -enye gị ohere igbochi ha.
Ọ na -eme nyocha na mmelite noge ụfọdụ ị depụtara.
Ịnwere ike ịtọ mgbidi nchekwa echegharịrị ka ọ na -arụ ọrụ ma ọ bụ na -agafe agafe maka ibe ịchọrọ.
Site na ụdị ọhụrụ a, ị nwere ike iji Spy Sweeper maka nyocha Virus gị.
Ị nwere ike chekwaa kọmpụta gị na ngwa ịntanetị na -emeghị ihe ọ bụla.
Ọ na -echebe gị mgbe niile megide nje ọhụrụ nwere nnukwu nchekwa data yana mmelite.
Ọ na -enye nchebe dị oke mma megide Trojans, nje, spyware na ikpuru.
Spyware dị ize ndụ ma na -akpasu iwe nwere ike ibute sistemụ gị nụzọ dị iche iche mgbe ị na -achọgharị na ịntanetị. Spy Sweeper na-enye gị nkwa nchekwa zuru oke. Site na mgbidi nchekwa siri ike ma nwee ọgụgụ isi, ị nwere ike nyocha ma hichapụ spyware na -agbalị ịbanye na sistemụ gị tupu ha abanye. Ọ bụrụ na kọmpụta gị nwere spyware, ị nwere ike ịchọta ma hichapụ ha nihi usoro nyocha dị elu nke Spy Sweeper.
Webroot Spy Sweeper Ụdịdị
Nha faịlụ: 40.12 MB
Mmepụta: Webroot Software